चीनमा नेपालका बिओके र हिमालयन बैंकले जितेको मुद्दा के हो ? « Janata Samachar
चीनमा नेपालका बिओके र हिमालयन बैंकले जितेको मुद्दा के हो ?
काठमाडौं । नेपालको दुई बैंकले चीनमा एउटा मुद्दा जितेपछि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्वदेश भित्रिने भएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डु (बिओके) र हिमालयन बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीवापत फसेको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेगरी हेनान प्रान्तको झेङझाओ इन्टरमिडियट कोर्टले आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट फिर्ता पाउने भएका छन् ।
बैंकका पक्षमा फैसला आएसँगै रकम फिर्ता पठाउनका लागि आजै चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई पत्राचार गर्ने दुवै बैंकको तयारी छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनीले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकमार्फत नेपालमा हिमालयन तथा बिओकेबाट ग्यारेन्टी रकम प्राप्त गरेको थियो ।
बीचमा ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि नेपाली बैंकहरुले कम्पनीलाई प्रदान गरिसकेको रकम निस्क्रिय रहँदै आएको थियो ।
बिओकेले ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकी डलर (७८ करोड ८३ लाख) को ग्यारेन्टी रकम प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै हिमालयन बैंकको करिब ६२ करोड रुपैयाँ फसेको थियो । मेलम्चीको काम छाडेपछि ठेकेदार कम्पनीले नेपालका बैंकहरुले फ्रड गरेको भन्दै यहीं झेङझाओ कोर्टमा निवेदन दिएको थियो । अदालतले पनि निवेदककै पक्षमा निर्णय गरेपछि नेपालका बैंकहरु उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतले तल्लो अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ पद्धति र चिनीयाँ कानुनअनुरुप नदेखिएको भन्दै निर्णयमाथि पुर्नविचार गर्न आदेश दिएको थियो।
गत अगष्टमा यसको सुनुवाई भएको थियो । अब फेरि अदालतको आदेशविपरित हारेको कम्पनी उच्च अदालत जान सक्नेछ । तर उच्च अदालतले नै यसअघि तल्लो अदालतलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकाले अब रकम प्राप्त हुने सम्भावना बलियो रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन
जतिसुकै नयाँ बीमा योजना ल्याएपनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने उहाँकाे
वर्षकाे अन्तिम दिन सुनकाे भाउ घट्याे
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार
दलित परिवारको आय वृद्धिका लागि बाख्रा वितरण
अर्घाखाँची । सन्धिखर्क नगरपालिका–७ भुजुङ्गेका पहिरो प्रभावित ३९ दलित परिवारमा आय वृद्धि गर्न बाख्रा वितरण